» कमरेड केपी कसरी बने ‘ओली बा’ ?
कमरेड केपी कसरी बने ‘ओली बा’ ?
२०७५, २३ श्रावण बुधबार १५:०७
काठमाडौँ २३ साउन । पूर्वी नेपालको जिल्ला झापा र सुदूरपश्चिमको जिल्ला हो कञ्चनपुर । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापाका र प्रतिनिधिसभा सांसद एवम् नेकपाका युवा नेतृ निरुदेवी पाल कञ्चनपुरकी हुन् ।
तर पनि ओली र पालबीच गजबको सम्बन्ध छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष ओली सांसद पाललाई ‘छोरी’ भन्छन् भने पाल ओलीलाई ‘बा’ । पाल ओलीलाई ‘बा’ भन्ने तत्कालीन एमाले पङ्क्तिकी पहिलो नेतृ हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीका भने आफ्नै छोराछोरी चाहिँ छैनन् ।
यस्तै, सम्बन्ध छ प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वमन्त्री एवम् सांसद महेश बस्नेतबीच । सांसद बस्नेतले ओलीलाई एक्लै भेट्दा होस् वा सार्वजनिक कार्यक्रममा नै किन नहोस् ‘बा’ भनेर सम्बोधन गर्छन् । उनका अनुसार ओलीले पाललाई धर्मपुत्री र बस्नेतलाई धर्मपुत्र भन्ने गरेका छन् । हाल नेकपाका युवा नेताहरू, जसको पृष्ठभूमि पूर्व एमालेको छ, उनीहरू धेरैले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘बा’ भन्छन् । अनौपचारिक कुराकानीमा तत्कालीन एमालेका धेरैजसो युवा नेता तथा कार्यकर्ताले ‘ओली बा’ भन्ने गर्छन् । यो यस्तो विषय हो, जसबारे एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा पनि बहस भएको थियो । ओली र माधवकुमार नेपालबीच सवालजवाफ पनि ।
जब निरुले ‘बा’लाई फोन गरिन्
साउन १५ गते राति बानेश्वरमा अज्ञात व्यक्तिले कञ्चटमा पेस्तोल ताकेर मोबाइल लुटेको दाबी गरेपछि सांसद पाल फेरि चर्चामा आइन् । उनले पार्टीको संसदीय दलको वैठक र संसदमा समेत घटनाको विवरण सुनाइन् ।
सांसद पालले यो घटना संसदमा भनेकी थिइन्, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा गइस् भने तेरो बाउ खड्गे ओलीले पनि तेरो लास पाउँदैन । यति बोल्यो अनि त्यो कता गयो थाहा भएन । मेरो मोबाइल पनि खोस्यो । आफ्नो ज्यानभन्दा ठूलो मोबाइल भएन म घरतिर गएँ ।’
प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष ओलीलाई सांसदले पालले संसदकै बैठकमा ‘बा’ भनेपछि फेरि एकाएक ‘ओली बा’को शब्द चर्चामा आयो । पेस्तोल प्रकरणपछि सांसद पालले सुरक्षा गार्डसमेत लिइन् । तर अज्ञात व्यक्तिले कञ्चटमा पेस्तोल ताकेर मोबाइल लुटेको खबर सांसद पालले प्रहरीलाई भन्दा पहिला प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएकी थिइन् । घटनाभएपछि सबैभन्दा पहिला उनी घर गएको र प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरेको विभिन्न मिडियालाई बताएकी छिन् । पालका अनुसार उनले फोन गर्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि बालुवाटारमै थिए । पालले गृहमन्त्रीलाई पनि घटनाबारे जानकारी दिइन् । पालले मिडियालाई दिएको जानकारीअनुसार उनले सुरुमा उक्त घटना तत्काल सार्वजनिक नगरिदिन प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरेकी थिइन् । यस विषयमा थप काम अर्को दिन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग त्यस दिन कुराकानी भएको पालको भनाइ थियो ।
यसअघि औपचारिक कार्यक्रममा सांसद बस्नेतले ओली ‘बा’ भनेको प्रसङ्गले पनि उस्तै चर्चा पाएको थियो । २०७२ को २७ साउनमा काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा ‘म महेश’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रम थियो । तत्कालीन उद्योगमन्त्री बस्नेतको संस्मरण विमोचनमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओली प्रमुख अतिथि थिए ।
विमोचन कार्यक्रममा बस्नेतले आफूलाई सबैले केपी ओलीको धर्मपुत्र भन्ने गरेको प्रसङ्ग सुनाए । बस्नेतले त्यसबेला भनेका थिए– ‘हामी सबैजना उहाँलाई ‘बा’ भन्छौँ । उहाँका छोराछोरी पनि छैनन् । उहाँलाई ‘बा’ भनेर सम्बोधन गर्ने पहिलो व्यक्ति चाहिँ निरु पाल हो । एमालेभित्रै निरु पाललाई उहाँकी धर्मपुत्री र मलाई धर्मपुत्र भन्ने गरेको सुन्छु । मलाई उहाँको धर्मपुत्र भनिएकोमा आपत्ति छैन ।’
बस्नेत यतिमा मात्र रोकिएनन् र अरू नेताप्रति गुनासो गरे । उनले पार्टीकै अरू नेताहरूबारे भनेका थिए, ‘मैले चाहेर पनि पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग नजिकिन सकेको छैन । केपी ओली ‘बा’ हो भने माधव नेपाल ठूलोबा, बामदेव गौतम साँइलो ‘बा’ हो । तर चाहेर पनि ठूला बाको माया पाउन सकेको छैन । म जति नजिक जान्छु, उहाँका आसेपासेहरूले छेकिदिन्छन् ।’
त्यसपछि बल्ल बस्नेतले ओलीसँगको आफ्नो भावनात्मक सम्बन्धबारे सुनाएका थिए, ‘म माओवादीको ज्यादतिविरुद्ध लड्दा मेरो दुईवटा औँला फुटेका थिए । त्यसका लागि लामो समय उपचार गर्नुप¥यो । कुनै नेताले तेरो औँला के भयो भनेर सोध्नुभएन । तर केपी ओलीले फोन गर्नुभयो । मलाई उहाँ मेरो आफ्नै अभिभावक जस्तै लाग्यो ।’
त्यसबेला ओलीले पनि महेश बहुप्रतिभाशाली भएको बताएका थिए । ओलीले महेशबारे भनेका थिए, ‘केपी ओलीले महेश बस्नेतलाई माया गर्छ भन्ने सबै नेपालीलाई थाहा छ । त्यसैले केपी ओलीले यो पुस्तक पक्कै पढ्यो भन्ने सोच्नु होला तर पढेको छैन । तर मलाई यति विश्वास छ, महेशले कुनै पनि गलत लेखेको छैन । त्यो लाग्यो भने साथीलाई फोन लगाएर सोधे हुन्छ ।’
कसरी सुरु भयो ‘बा’
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यसको युवा सङ्गठन वाईसीएल चर्चामा थियो । बेला–बेला कानुन हातमा लिएको भनेर उसको आलोचना पनि हुनथ्यो । हुन त तत्कालीन एमालेमा युवा सङ्गठनको नाम प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घ थियो । २०४६ को आन्दोलनपछि बनेको यो सङ्गठनको सुरुमा ओलीले नै नेतृत्व गरेका थिए । जब पहिलो संविधानसभामा चुनावमा तत्कालीन एमालेको हार भयो । एमालेको युवा सङ्गठनमा युथ फोर्स बनाइयो । वाईसीएलसँग लडन बनाइएको यो सङ्गठनको नेतृतव महेश बस्नेतले गरेका थिए । माओवादीको बर्चस्व रोक्न युथ फोर्स गठन भयो । त्यसको अभिभावकत्व ओलीले गरे । युथ फोर्सको हौसला बढाउन ओली अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत भए ।
महेश बस्नेतका अनुसार सुरुमा तत्कालीन युवा सङ्घको केन्द्रीय सदस्य निरु पालले ओलीलाई ‘बा’ भन्न थालेकी हुन् । ओली त्यसरी प्रस्तुत हुँदा केही युवाहरूले ओली कमरेडको सट्टा ओली ‘बा’ भन्न थाले । युवा सङ्घका केही युवाहरूले ओलीलाई ‘बा’ भन्न रुचाइरहे । कार्यकर्ताहरू ओलीलाई देख्ना साथ ओली ‘बा’ भन्न पुग्थे । त्यहीँबाट ओली ‘बा’ सुरुवात भयो । अहिले कसैले नजिकिएर ‘ओली बा’ भन्छन् । कसैले सुनेको भरमा ‘ओली बा’ भन्छन् । कसैले कमरेड भनेर सम्बोधन गर्छन् । तर अहिले पार्टीमा ओली कमरेड भन्दा पनि बा भन्दै सम्बोधन गर्ने क्रम बढ्दो छ ।
बैठकमै ‘बा’ भनेको भन्दै विरोध
‘बा’ शब्द एमालेको बैठकमै एक पटक बहसको विषय भयो । एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालबीच चर्काचर्की परेको थियो । नेता नेपालले ओलीलाई देवत्वकरण गर्न खोजिएको र पार्टी कोटरीबाट चलिरहेको आरोप लगाएपछि ओलीले आफूलाई देवत्वकरणमा रूचि नरहेको बताएका थिए । नेता नेपालले ओलीलाई उनी निकट कार्यकर्ताले ‘बा’ भन्ने गरेकोमा समेत आपत्ति जनाउँदै त्यस बैठकमा भनेका थिए, ‘बा होइन कमरेड भन्नुपर्यो । पार्टीलाई कोटरीबाट होइन, संस्थागत ढङ्गले चलाउनुपर्यो ।’ ओलीको जवाफ थियो, ‘मैले पुत्रवत व्यवहार गरेँ हुँला । पुत्रिवत् व्यवहार गरेँ हुँला । त्यसकारण बा भने होलान्, के गर्ने त रु कसैकसैलाई ‘आमा’ भनेको पनि सुनिन्छ ।’
तत्कालीन एमालेमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई ‘आमा’ भन्नेहरू पनि थिए । ओलीले यही सङ्केत गरेका थिए ।
सांसद निरु पाल– मनमोहन सबैका बा हुन हुने केपी ओलीलाई बा भन्न नहुने रु
म युवा सङ्घको केन्द्रीय सदस्य थिएँ । केपी ओली संस्थापक हुनुहुन्थ्यो । संस्थापक भनेको गार्जेन नै हो । एउटा त्यो प्रसङ्गमा मैले उहाँलाई बा भनेको हो । अर्को, कुरा मनमोहन अधिकारीलाई सारा दुनियाँले बा भन्छ । अनि केपी ओली पनि मनमोहन बा जस्तै हो । अहिले सिङ्गो कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्नेदेखि लिएर, देशलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने, विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने यी सबै कुरालाई हेर्दा उहाँ पनि बा नै हो । मनमोहन सबैका बा हुने तर केपी ओली किन बा हुन नसक्ने भनेर मैले बा भनेको हुँ । उहाँले कार्यकर्तालाई गर्ने माया, संरक्षण त्यो त गार्जेनले मात्रै गर्छ । त्यो भएर मैले उहाँलाई बा भनेको हुँ । अब अहिले त बा पार्टीमा ब्रान्ड नै भइसक्यो । अब उहाँका छोरछोरी नभएको भएर पनि होला सिङ्गो युवा कार्यकर्ताले बा भन्दा रमाउनु पनि हुन्छ होला । पार्टीभित्रै पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा बा भन्ने भनेर लखेट्ने गर्छन् । कमरेड भन्नुपर्छ भनेर कुरा उठाउँछन् ।
पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका युवा नेता महेश बस्नेत–हामीले सधैँ अध्यक्षलाई ‘बा’ भन्छौँ
पहिला पहिला पार्टीमा मित्र भन्ने चलन थियो । पछि कमरेड भन्न सुरु भयो । ६५ को हाराहारीतिर दाइ, दिदी प्रचलन आयो । ‘बा’ शब्द पार्टीमा युवा सङ्घबाट आएको हो । युवासँगको केन्द्रीय सदस्य निरु पालले ‘बा’ भन्नु लाग्नुभयो । त्यसपछि युवासँगका धेरैले ‘बा’ भन्न थाले । पार्टीमा अन्य केही नेताहरूले पनि उहाँलाई ‘बा’ भन्न लाग्नुभयो ।
कोही त झण्डै उहाँकै उमेरकाले पनि भन्छन् । अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई ‘आमा’ भन्छन् । राष्ट्रपतिलाई दिदी भन्छौँ । हामीले सधैँ अध्यक्षलाई ‘बा’ भन्छौँ । बा भन्दा उहाँ रमाउनु हुन्छ । आफ्नो बच्चाबच्ची नभएर पनि होला, उहाँ रमाउनु हुन्छ । अहिले पार्टीभित्र दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले बा भन्ने प्रचलन बढेको छ । आनन्द पोखरेललगायतका नेताहरू पनि ‘बा’ भन्छन् । मैले अभिभावक जस्तै भएर ‘बा’ भनेको हो ।
सांसद, मना केसी– ठ्याक्कै ‘बा’कै व्यवहार गर्नुहुन्छ
खास त नजिकबाट उहाँलाई बुझ्दा ठ्याक्कै ‘बा’कै व्यवहार गर्नुहुन्छ । भेट्दा वा फोनमा कहिले काहीँ कुरा हुँदा पनि नातिनातिना कहाँ छन् रु उनीहरूलाई कस्तो छ रु ल छोरी आएकी छ, खाना नास्ता खुवाएर पठाउनु है भन्नु हुन्छ । जतिबेला पनि छोरीको व्यवहार गर्ने गर्नुहुन्छ । कहिलेकाहीँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भनिसकेपछि ‘बा’ नभन्दा कस्तो कस्तो हुन्छ ।
फोनमा, अनौपचारिक भेटमा अहिले पनि ‘बा’ भन्ने गर्छु । कहिलेकाहीँ झुक्किएर औपचारिक कार्यक्रममा पनि ‘बा’ भनिन्छ । मलाई पनि छोरी भनेर बोलाउनु हुन्छ । आफ्नै बाजस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ, त्यसैले बा भन्छु ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य – म बा भन्दिनँ, कमरेड भन्छु
‘बा’ चाहिँ किन भन्छन्, त्यो त थाहा छैन । म कहिल्यै पार्टीका अध्यक्षलाई बा भन्दिनँ, कमरेड भन्छु । केपी ओली अध्यक्ष हुनुपूर्व युवा सङ्घमा ओली कमरेडलाई ‘बा’ भनेको सुन्नमा आयो ।
खासगरी केपी कमरेडले उहाँकोमा नियमित भेट्न गइरहने, व्यक्तिगत ढङ्गले नजिक भएकाहरूलाई मेरी छोरी, छोरा, यो ठूली छोरी भनेर सम्बोधन गरेको अरूले बा भन्न लागेका होलान् जस्तो मलाई लाग्छ । कतिपय आफूसँग नजिक हुने कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने, माया गर्ने, नजिक बनाउने कला उहाँसँग थियो । पार्टी नेता कार्यकर्ताको मात्र सम्बन्ध होइन कि अनौपचारिक सम्बन्धजस्तो छोरीछोरा भनेर सम्बोधन गर्ने, उहाँसँग नजिक भइरहने मान्छेहरूले बा भन्न सुरु गरेका हुन् ।
त्यसपछि सुनेको भरमा ‘बा’ भन्नेहरूको पङ्क्ति बढ्यो । कम्युनिस्ट पार्टीमा कल्चरको हिसाबले पनि ‘बा’ भन्ने संस्कारलाई राम्रो मानिदैन । पार्टीको नेतालाई सम्मान गर्दा कमरेड भनेर भन्छौँ, त्यो हाम्रो संस्कार हो । पार्टीमा सिनियर जुनियर सबैलाई सम्मान गर्दा कमरेड भनेर सम्बोधन गर्ने प्रचलन छ । सामान्यतया कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बा, आमा, दिदी, बहिनी भन्ने चल्दैन । पछिल्लो पटक केही हाम्रा साथीहरूले बा, आमा भन्ने गर्नुभएको छ ।
ओलीको पनि रुचि छ तर बेला बेला दिक्क हुन्छन्
केही समय कम चर्चामा रहेको ‘ओली बा’ यतिबेला फेरि बढेर आयो । जब ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने, तत्कालीन एमालेका ओली समूहका सबैजसो युवाले उनलाई ‘ओली बा’ भन्छन् । यी युवा नेताहरूका अनुसार कार्यकर्तालाई छोरा छोरी भन्न रुचाउँछन् । सुरुवात प्रधानमन्त्री ओली आफैले गर्ने गरेको ती नेताहरूको भनाइ छ । भेटघाटमा आफ्ना निकटका कार्यकर्तालाई छोराछोरी भनेर पहिला आफै सम्बोधन गर्ने गर्छन् ओली ।
प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेताका अनुसार उनी बिरामी हुँदा वा एक्लो महसुस गर्दा निकटस्थका बालबच्चासँग रमाउन शौखिन छन् । तर प्रधानमन्त्री हुँदा त्यस्ता शौख पूरा हुँदैन । बरु बा भन्दै हैरान पार्नैहरू धेरै बढेका छन् । ‘बा’ भन्दै लाभका लागि धेरै नेता कार्यकर्ता उनको सचिवालयमा पुग्छन् । कहिलेकाहीँ त ओली आफूलाई बा भन्नेहरूबाट आजित पनि हुन्छन् ।
अहिले प्रधानमन्त्रीलाई बा भन्दै भेट्न जाने धेरै छन् । अन्य नेता, कार्यकर्ताजस्तै कतिपय उद्योगी, व्यापारी र ठेकेदारसमेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘बा’ भनेर सम्बोधन गर्छन् ।
ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर बालुवाटार छिरेलगत्तै ‘बा–बा’ भन्दै धेरै मान्छे नजिकिएका थिए । तर अहिले भने ओली त्यस्ता ‘छोराछोरी’बाट सजग भएको उनको सचिवालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘अहिले ‘बा’ भन्दै भेट्न आउनेहरूलाई पहिला जस्तो सहज छैन । बा भनेर चाहिने भन्दा धेरै फाइदा लिन खोजेपछि उहाँ आफैले छोराछोरी भनेकाहरूबाट पनि बेलाबेला टाढिने प्रयास गर्नुहुन्छ ।’ ती कर्मचारीले भने ।
कम्युनिस्टमा ‘कमरेड’, काँग्रेसमा ‘दाइ’
कम्युनिस्ट पार्टीमा मुख्यतः पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सम्मान गरेर बोल्ने शब्द हो ‘कमरेड’ । विषेश गरेर नेतृत्व तहमा कमरेड शब्द निकै प्रयोग हुन्छ । सामान्य कार्यकर्ता पनि एक आपसमा कमरेड शब्दले सम्बोधन् गर्छन् । सामान्य शिष्टाचारका रूपमा कम्युनिस्टहरू ‘अभिवादन कमरेड’ भन्न रुचाउँछन् । तर आजभोलि शिष्टाचारको भाषा बदलिएको छ । काङ्ग्रेसभित्र नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दा ‘दाइ’ शब्द बढी प्रयोग भएको सुन्नमा आउँछ । पार्टीभित्र दाइ, भाइ, दिदी, बहिनी भन्दै सम्बोधन गर्दा आत्मीयता बढ्ने गरेको काङ्ग्रेस निकट नेताहरू बताउँछन् ।
इलेक्ट्रिक संघ मकवानपुरको साधारणसभा
के-के पाउँछिन् मिस वर्ल्डले ?
गुरुङ परिषदको स्मरणपत्र : ‘आदिवासी जनतातिलाइ सरकारले बेवास्ता गर्यो ’
ट्रकको ठक्कर दुईको मृत्यु
बेपत्ता कोइरीको शव फेला
राक्सिराङ गाउँपालिका सेवा दिन गाउँ गाउँमा
चालक अनुमतिपत्रमा प्रविधिका कारणले सेवाग्राहीलाई समस्या
नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठक २९ गते हुने
‘नयाँ पाइला’ को पहिलो अधिवेशन पुस १ गते हुने